Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Ukuhlala ukwimo xa uhambela ngaphandle kwamathandabuzo kuyingxaki. Ukutya okuhendayo kuhlala kunikezelwa. Oku kudityaniswa nekhefu kwindlela yakho yesiqhelo yokuzivocavoca ekhokelela ekuweni kweenqwelo zokuzilolonga. Ke umntu uhlala njani elungile ngelixa ehamba? Yinto…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Ngaba wakha wazibuza ukuba yintoni kunjani ukuba ukuqwalasela, wayemangalisiwe, iifestile umfanekiso elikhulu njengoko uhamba umhlaba? Kuthekani ukuba zenza ukuba balala sinyikimisa ngcembe kololiwe njengoko trundles phantsi a track? Train travel is a very common…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Nabani na apha ovela ngaphandle kwaseYurophu? Phakamisa isandla sakho, ukuba wena njengoko zibamb 'ongezantsi xa transit luluntu njengoko mna. Uqinisekisa, INew York inendlela yangaphantsi, kwaye iToronto iqhuba imetro, kodwa ngobukhulu, umhlaba uyachuma ezimotweni. So whenever we find ourselves making the…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Kwihlabathi liphela, Ukupakisha kuneziphumo ezahlukeneyo nezenzo, umzekelo: Ukucebisa eMzantsi Afrika kuyafuneka, njengoko kunjalo e-USA. Kulindeleke ukuba ushiye inqaku phakathi 15 yaye 25% eMelika, and if you don’t you may very…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Kukholelwa ukuba ukuhamba yinto enye oyithengayo ukuze ube sisityebi okanye uzive usisityebi! Kwaye akusoloko kuyimfuneko ukuba kufuneka wahlukane nemali yakho oyisebenzeleyo nzima ukuze wonwabe. While planning to venture out in the sun-kissed tropical…